थाहा खबर: दुई व्यङ्ग्य
(Monday, 06 April, 2020)
| ३ वर्ष अघि
माघ १४, २०७३
१- जागिरको तलब, कामको घुस
नेपालका सरकारीलगायत सडक र यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई लाग्न गरेको आरोप भनेको अधिकांश कर्मचारी घुस्याहा छन् भन्ने हो। सरकारी कर्मचारीको बलियो आमदानीको स्रोत हो- लाइसेन्स, ठेक्कापट्टा, जाँचबुझ, ओभरलोड। के गर्नु, त्यसबाट आमदानी नभए घर खर्च नै चल्दैन! त्यसैले त्यसको जरुरी छ।
मेरो विचारमा त्यो घुस होइन। त्यो बेइमानी र व्यभिचारी पनि होइन। फगत मान्छेले काम र जागिरको परिभाषा नबुझेर त्यस्तो पाप सोचेका मात्र हुन्। मेरो विचारमा धिक्कार छ तिनलाई, कर्मचारीले तलबवापत पाउने मासिक जाबो १५-२० हजार! भत्ता, उपचार, पेन्सन, बोनस आदिबाट त के पो आउँछ र! घर जाने बेलामा पाउने १०-८ लाख त हो, त्यो पनि सरकारी जागिर खाइदिएवापत!
अनि घुस नि! त्यो त काम गरेवापतको ज्याला हो। घुस त आधारभूत अधिकार हो। एउटा हस्ताक्षरले अरुले करोडौँ कमाउने भएपछि राष्ट्रसेवकले हस्ताक्षर गरेवापतको अतिरिक्त रकम लिँदा किन विरोध? बुझ्नुभो त? तलब- जागिरवापत, घुस- काम गरेवापत, सक्की गो नि!
२- सुझाव महिमा
सुर्खेत-जुम्ला सडक खण्डको दुर्घटनामा सरकारले यातायात सचिवको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गर्‍यो। तीन महिनापछि १७ लाख ६ हजार खर्च गरेर गम्भीर, संवेदनशील र वैज्ञानिक सुझाव दियो- छानविन समितिले, जसमा:
निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माणको अप्ठ्यारोबारे सुझाव दिए। सडक विभागले गम्भीर रुपमा सडकको गुणस्तर छानविन गर्‍यो।
यातायात व्यवस्था विभागले गाडीको स्तर अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्‍यो।
ट्राफिक प्रहरीले ऐन, कानुन भए, नभएको हेर्‍यो।
कानुन मन्त्रालयले ऐन, कानुन पालना भए, नभएको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्‍यो।
मजदुर संघले गुरुजी र सहायकको अधिकार, सेवा, सुविधा र सुरक्षाबारे चासो दियो।
यातायात व्यवसायी संघले गाडीको क्षतिपूर्ति र बीमाको लागि गम्भीर रूपमा आवाज उठायो।
हुन पनि हो, साह्रै राम्रो रिपोर्ट आयो, किनकि सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट सक्दो योगदान गरे।
फगत एउटा मात्र छुट्यो- निर्दोष जनताको मृत्यु, घाइते र अपाङ्ग बिरामीको कुरा!
(भट्टराईको भर्खरै प्रकाशित व्यङ्ग्य कृति 'व्याक गियर'बाट)
सडक सुरक्षा अभियन्ता भट्टराई नेपाली साहित्यका विशेषगरी कविता र व्यङ्ग्यमा कलम चलाउँछन्।
जुम्लामा घुम्ती शिविरमार्फत स्वाब संकलन गरिने
दैलेखमा नौ जनाको स्वाब संकलन, विदेशबाट आएकाकाे खाेजी तीव्र
औषधि ढुवानी ठप्प छ, संकट आउनुअघि नै विकल्प खोजौं
भारतका क्वारेन्टाइनमा २३८ नेपाली
भारतीय प्रधानमन्त्रीसहित सबै सांसदहरुको ३० प्रतिशत तलब कटौती
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ११ स्थानमा तरकारी बजार सञ्चालन गर्दै